ကျွန်ုပ်ကို သခင်ယေရှု လွတ်မြောက်စေပြီ
တစ်ချိန်က ကျွန်တော်ဟာ မူးယစ်ဆေးစွဲသူ၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပရောပရည်နေပြီး မိန်းမလိုက်စားတဲ့သူ၊ အရက်သမားတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုက ကျွန်တော့်ကို စွန့်ပစ်လို့ ကျွန်တော့်မှာ မှီခိုအားကိုးစရာ ဘယ်သူမှမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝက မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပါပဲ။ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲလို့ အရင်က ထောင်ကျခဲ့ ဖူးတယ်။ မကောင်းတာကို မလုပ်သင့်မှန်းသိပေမဲ့ ကောင်းတာလည်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ခရစ္စမတ်အချိန်တစ်ခုမှာ ပျော်စရာကောင်းတာတွေ လုပ်ရအောင်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့အရက်တွေသောက်ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကို ဘုရားကျောင်း တစ်ခုကို ခေါ်သွားတယ်။ သီချင်းဆိုကြမယ်၊ ကကြမယ်ပေါ့။ ဘုရားကျောင်းကို ရောက်တော့ သင်းအုပ်ဆရာက ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုဆိုပြီး မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးတယ်။ ဘုရားကျောင်းကို ထပ်လာဖို့ သင်းအုပ်ဆရာက အမြဲတမ်းကြိုဆိုနေပါတယ်ဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်အဲဒီကို ထပ်မသွားခဲ့ပါဘူး။
နောက်တော့ ဘဝကို စိတ်ကုန်လွန်းလို့ အသက်တောင်မရှင်ချင်တော့ဘူး။ သေတာက ကောင်းသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်မကြာခဏတွေးမိတယ်။ နောက်သုံးလလောက်အကြာမှာ ကျွန်တော်တစ်နေရာရာကို သွားရင်း ဘုရားကျောင်းကို သွားဖို့ စိတ်ထဲမှာ နှိုးဆော်ခံရလို့ ဘုရားကျောင်းကို ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ သင်းအုပ်ဆရာက ကျွန်တော့်ကို ယေရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ “တစ်ခုခုကို မင်းမယုံဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ မင်း စမ်းကြည့်သင့်တာပေါ့။ သခင်ယေရှုထံမှ စိတ်ချမှုကို တောင်းပါ။ မင်းမှာ မျှော်လင့်ချက် မဲ့တယ်၊ ကူညီရာမဲ့တယ်လို့ ခံစားရတယ်ဆိုရင် ရိုးသားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံပြီး မင်းဘဝထဲ ဝင်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ။ သူက မင်းကို မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲလန်းမှုကနေ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ယုံမက ထာဝရအသက်ကို ပေးဖို့လည်း အာမခံနိုင်တယ်“ဟု ဆရာက ကျွန်တော့်ကို အားပေးတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သခင်ယေရှုကို ကျွန်တော် ခေါ်ဖိတ်လက်ခံခဲ့တယ်။ သူ့ဆီက စိတ်ချမှုကိုလည်း တောင်းလျှောက် ခဲ့တယ်။ နောက်သုံးရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ကွမ်းမစားဘဲနေနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော် ဆေးလိပ်ပြတ်လာတယ်။ နောက် အရက်လည်း ပြတ်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ မူးယစ်ဆေးစွဲတဲ့ဘဝက လွတ်မြောက်ခဲ့ တယ်။ အခုဆိုရင် စီးကရက်အနံ့ရတယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော် အန်ချင်မိတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ အခုဆို ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီး ဖြစ်လာ ပါပြီ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ အသက်တာကို ပေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ လူဆိုးကြီးပေါ့။ အခုမှာတော့ ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းရခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော် အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရ ပါတယ်။ — ကေကေ၊ နေ့စဥ်ခွန်အား စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ဦး
COPYRIGHT © 2020 နေ့စဥ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်းမှ မူပိုင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ Payment icons by icons8.
သခင်ခရစ်တော်ကို သိကျွမ်းရန်လိုအပ်နေသူများအား ခရစ်တော်၏သတင်းကောင်းကို မျှဝေရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကေကေကဲ့သို့သောလူများ သခင်ယေရှုအကြောင်းကြားပြီး သူတို့၏အသက်တာ၌ သခင့်ကို မိမိ၏ အရှင်သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ခေါ်ဖိတ်လက်ခံလာစေရေးအတွက် ဧဝံဂေလိနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာစောင်များကို ထုတ်ဝေရန် ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ဧဝံဂေလိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာစောင်များနှင့် ယုံကြည်သူအသစ်များအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစာစဥ်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက် ငွေ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သမ္မာတရားကို ဆာငတ်ရှာဖွေနေသူတို့အတွက် ဤစာစောင်များကို ကူညီမျှဝေ ပေးမည့်သူများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။ ဤစာစောင်များကို ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
(ဖတ်ရှုရန် သို့မဟုတ် ဝေမျှရန် ရုပ်ပုံကိုနှိပ်ပါ။)
ဧဝံဂေလိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာစောင်များနှင့် ယုံကြည်သူအသစ်များအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစာစဥ်များကို မြန်မာဘာသာသို့ ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် သင်ပါဝင်ပေးလှူလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အလွန်ကျေးဇူးတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Credit/Debit card ဖြင့် ပေးလှူရန် ဤ လိမ္မော်ရောင်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ “For Myanmar project” ဟု Remark (မှတ်ချက်ကော်လံ)တွင် ကျေးဇူးပြု၍ အင်္ဂလိပ်လို ဖြည့်သွင်းရေးပေးပါ။ စုံစမ်း မေးမြန်း လိုပါက အောက်ပါ “ဆက်သွယ်ရန်”ပုံစံကို ဖြည့်စွက်ပေးပို့ပါ။
နေ့စဥ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်း၊ အမှတ် (၁) စောတေလိန်း၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျိုးသားရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
မြန်မာပြည်တွင်းအတွက် KBZpay (သို့) Wave Money မှတစ်ဆင့် ရုံးဖုန်း ၀၉၄၂၆၄၉၂၀၁၇ သို့ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
လူများစွာတို့မှာ ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့် ကြုံရသည့် စီးပွားရေးမပြေလည်မှုများ၊ ကြောက်စိတ် စိုးရိမ်စိတ်များနှင့် ဘဝရှင်သန်ရုန်းကန်နေရခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့် ကိုဗစ် ၁၉ ဒုတိယလှိုင်းကို ကောင်းမွန်စွာ အောင်မြင်ကျော်လွှားသွားနိုင်ရန် ဆုတောင်းပေးပါ။
နေ့စဥ်ခွန်အား အမှုတော်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် နာမတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ယူလျက် အပ်နှင်းစေစားသည့် အလုပ်တာဝန်များကို ပြီးစီးထမ်းဆောင်နိုင်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤသို့ စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည့်အချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှ နှစ်သိမ့်မှု လိုအပ်သူများအတွက် သမ္မာကျမ်းရှုထောင့်မှ မစမှုပေးမည့် စာစောင်များကို မျှဝေပေးနိုင်ရေးကို မျှော်လင့်ပါသည်။
သမ္မာတရားကို ဆာငတ်ရှာဖွေနေသူတို့အတွက် အထက်ပါစာစောင်များကို မျှဝေပေးမည့် ဧဝံဂေလိ စိတ်ထက်သန်သူများကို ဘုရားရှင် စေလွတ်ပေးပါမည့်အကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါ။
ဤလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ လုံလောက်ပြည့်မီစွာ ရရှိရေးအတွက် ဆုတောင်းပေးပါ။
နောက်ထပ် အံ့သြဖွယ်ရာ တစ်ခု
သို့သော် . . .
သမ္မာကျမ်းစာ၊ ဘာသာတရားနှင့် အပြစ်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် သင့်မေးခွန်းများအတွက် အဖြေ
မိသားစုဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ခရစ်ယာန်တို့၏ အမူအကျင့်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သင့်မေးခွန်းများအတွက် အဖြေ
နေ့စဥ်ခွန်အား - အထူးထုတ်
ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၊ အသင်းတော်၊ ခရစ်ယာန်ကတိကဝတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သင့်မေးခွန်းများအတွက် အဖြေ
ကေကေကဲ့သို့သော လူများကို ကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ
ယုံကြည်သူအသစ်များအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစာစဥ်များ